GTranslate: Yakareruka WordPress Dudziro Plugin Uchishandisa Google Dudziro | Martech Zone
Muvhuro, Mbudzi 2, 2020 China, Kurume 18, 2021 Douglas Karr
Munguva yakapfuura, ndanga ndichizeza kushandisa shanduro yemuchina Yangu saiti. Ndingafarire vashanduri pasi rese kuti vabatsire mukududzira saiti yangu kune vateereri vakasiyana, asi hapana imwe nzira yekuti ndidzorere iwo mutengo.
Izvo zvakati, ini ndinoona kuti yangu saiti zvemukati zvakagovaniswa pasirese zvishoma zvishoma - uye vanhu vazhinji vari kushandisa Shandurudzo google kuverenga zvinyorwa zvangu mumutauro wavo. Izvi zvinoita kuti ndive netarisiro yekuti dudziro yacho ingave yakanaka zvakakwana izvozvi Google painoramba ichivandudza nekushandisa muchina kudzidza uye njere dzekunyepedzera.
Nezvo izvo mupfungwa, ini ndaida kuwedzera plugin yaipa shanduro ichishandisa Google Dudziro, asi ini ndaida chimwe chinhu chakazara kupfuura kudonhedza kwakashandura saiti. Ini ndoda mainjini ekutsvaga kuti anyatsoona uye indekisi yangu yezvinhu pasirese izvo zvinoda akati wandei maficha:
Metadata - apo injini dzekutsvaga dzichikambaira saiti yangu, ini ndoda hreflang ma tag mumusoro mangu kupa injini dzekutsvaga dzakasiyana nzira dze URL dzemutauro wega wega.
URL - mukati meWordPress, ndinoda kuti ma permalinks apinze mutauro wekushandura munzira.
Tariro yangu, hongu, ndeyekuti ichavhura saiti yangu kune vateereri vakawandisa uye pane yakanaka kudzoka kune investment sezvo ini ndichigona kuwedzera yangu yakabatana uye yekushambadzira mari - pasina kuda kuyedza kweshanduro yemanyorerwo.
Iyo GTranslate plugin uye inoperekedza sevhisi inosanganisira zvese izvi maficha pamwe nezvimwe zvinoverengeka sarudzo:
Dashboard - Iyo yakazara yebasa dashibhodhi yekumisikidza uye kushuma
Mashini Shanduro - Pakarepo Google neBing shanduro yekushandura.
Tsvaga Injini Indexing - Injini dzekutsvaga dzinonongedza mapeji ako akashandurwa. Vanhu vachakwanisa kuwana chigadzirwa chaunotengesa nekutsvaga mumutauro wavo.
Tsvaga Injini Yakanaka URLs - Iva neyakasiyana URL kana Subdomain yemutauro wega wega. Semuyenzaniso: https://fr.martech.zone/.
Shanduro ye URL - Ma URL ewebhusaiti yako anogona kuturikirwa izvo zvakakosha zvakanyanya kune mitauro yakawanda SEO. Iwe unozogona kugadzirisa iyo yakashandurwa ma URL. Unogona kushandisa iyo GTranslate chikuva kuti uone iyo yakashandurwa URL.
Shanduro Editing - Rongedza dudziro nemaoko neGtranslate's inline edhisita zvakananga kubva muchirevo. Izvi zvinodikanwa kune zvimwe zvinhu… semuenzaniso, ini handidi zita rekambani yangu, DK New Media, rakashandurwa.
Mu-Mutsara Kugadziridza - Unogona zvakare kushandisa syntax mukati mechinyorwa chako kutsiva zvinongedzo kana mifananidzo yakavakirwa pamutauro.
Iyo syntax yakafanana nemufananidzo:
Uye kana iwe usiri kuda chikamu chakashandurwa, unogona kungo wedzera kirasi ye notranslate.
Usage Statistics - Unogona kuona traffic yako yekushandura uye nhamba yeshanduro pane yako dashboard.
Subdomains - Unogona kusarudza kuve neiyo subdomain kune yega yega mitauro yako. Ini ndakasarudza iyi nzira pane iyo URL nzira nekuti yaive shoma mutero pane yangu webserver. Iyo subdomain nzira inokurumidza zvinoshamisa uye inongonongedza yakananga kuGtranslate yakachengetwa, rakashandurwa peji.
Domain - Unogona kuve nedomain yakasarudzika yemutauro wega wega. Semuenzaniso, kana ikashandiswa .fr yepamusoro-chikamu duraini (tld), yako saiti inogona kukwirisa kumusoro pane yekutsvaga injini mhedzisiro muFrance.
Vanoshanda - Kana iwe uchida kuti vanhu vabatsire neshanduro yemanyorerwo, vanogona kuwana GTranslate uye nekuwedzera zvinyorwa zvemanyorerwo.
Hora Nhoroondo - Tarisa uye gadzirisa yako nhoroondo yezvinyorwa zvinyorwa.
Seamless Dzidzo - Iko hakuna kudikanwa kwekutarisa kune software kugadzirisa uye nekuaisa iwo. Isu tine hanya nezvekumwe kugadzirisa. Iwe unongonakidzwa neshanduro yemazuva ese mazuva ese
Languages - Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Chinyakare), Corsican, Croatia, Czech, Danish, Dutch, English , Esperanto, Estonia, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese , Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish, Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malayalam, Malay, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Serbian, Shona, Sesotho, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Samoan, Scots Gaelic, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish , Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu
Saina kumusoro kweGTranslate 15-Day Trial
GTranslate uye Analytics
Kana iwe uri kushandisa iyo URL nzira yeGTranslate, hausi kuzomhanya mune chero nyaya nekutevera yako yakashandurwa traffic. Nekudaro, kana iwe uri kushanda kubva kuma subdomains, iwe uchafanirwa kugadzirisa zvakanaka Google Analytics (uye Google Tag Manager kana uri kuishandisa) kutora iyo traffic. Pane chinyorwa chikuru chinotsanangura setup iyi saka ini handisi kuzodzokorora pano.
Mukati meGoogle Analytics, kana iwe uchida kukamura analytics yako nemutauro, unogona chete wedzera zita remubatanidzwa senzvimbo yechipiri kusefa traffic yako ne subdomain.
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we GTranslate.
Tags: bing shanduragoogle translatehreflangshanduro yemuchinashanduroWordPressWordpress pluginshanduro yeshokoWordpress dudziro plugin